Dhageyso Odayaasha Gobalka Banaadir Oo Bogaadiyay Dagaalkii Ruun-nirgood. – Calamada.com
Dhageyso Odayaasha Gobalka Banaadir Oo Bogaadiyay Dagaalkii Ruun-nirgood.
calamada May 4, 2016 1 min read
Iyadoo ay isa soo tarayaan bogaadinta loo jeedinaya dagaalkii sida ba’an loogu xasuuqay maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka ee dhawaan ka dhacay degmada Ruun-nirgood ee gobalka Shabeelada Dhexe sidoo kale waxaa dagaalkaasi ka hadlay odayaasha gobalka Banaadir.
Nabood Cabdi Kariim Muuse Casir oo ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka Wilaayada Banaadir oo la hadlayay Idaacada Islaamiga ah ee Andalus waxa uu xusay in ka odayaal ahaan ay si aad ah u bogaadinayaan howlgalkaasi taariikhda galay.
Sidoo kale Nabadoon Cabdi Kariim Muuse Casir waxa uu soo hadal qaaday madaafiicdii habeen hore lagu garaacay xerada Xalane oo ah taliska ugu weyn ee ciidamada Kufaarta Afrikaanta ay ka sameysteen magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha odayaasha Wilaayada Banaadir waxa uu duqeyntaasi ku tilmaamay mid muujineysa sida maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka iyo shisheeyaha kufaarta ah ugu fashil meen ka hor tagida weerarada Mujaahidiinta.
Halkan Ka Dhageyso Gudoomiyaha Odayaasha Gobalka Banaadir.
Previous: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 27-07-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 27-07-1437 Hijri.